My Local Passion MM- Stories & Products from Myanmar
‍ကယားပြည်နယ်၏ မြန်မာ့ယဥ်ကျေးမှု နှင့် လူမျိုးစုရိုးရာဓလေ့များ
စိတ်ဝင်စားဖွယ် ချင်းပြည်နယ်နှင့် လူမျိုးတို့အကြောင်း
လှပ သေသပ်ပြီး ခေတ်မှီတဲ့ လက်ဝတ်ရတနာဆိုင်ကို ရှာနေတယ်ဆိုရင်တော့ ဒီပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ဆိုင်လေးတွေက သင့်ကို စိတ်ကျေနပ်မှုပေးနိုင်မှာပါ
တောင်ကြီးဈေးနေ့ ( ၅ ရက်တစ်ဈေး)
တောင်ကြီး ဈေး ၅ ရက်တစ်ဈေးဆိုတာနဲ့ အရောင်စုံဈေးသည်တွေ၊ အစားအသောက်နဲ့၊ အသီးအနှံတွေရဲ့ အနံ့တွေ အပါအဝင် ပုံစံပေါင်းစုံနဲ့ဈေးရောင်းနေတဲ့ ဈေးသည်တွေရဲ့ အသံတွေ၊ ဈေးဆစ်နေတဲ့ ဝယ်သူတွေရဲ့ အသံတွေနဲ့အတူ တွေးစရာတွေပေါ်လာတော့တာဘဲ။ ဈေးဆိုတာ လိုချင်တာတွေဘဲ ဝယ်ယူနိုင်တဲ့ နေရာတစ်ခုလား။ ကျွန်မအတွက်တော့ လိုချင်တာပဲဝယ်နိုင်တဲ့ နေရာတစ်ခုသက်သက် မဟုတ်ခဲ့ပါ။ ဈေးဆိုတဲ့နေရာက တကယ်လေ့လာကြည့်ရင် လိုအပ်တာတွေ ဝယ်နိုင်ရုံသာမက ဒေသတစ်ခုရဲ့ အငွေ့အသက်တွေဖြစ်တဲ့ဒေသခံတွေရဲ့ဘဝရပ်တည်မှု၊ စီးပွားရေး၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၊ ဓလေထုံးတမ်း၊ ဒေသထွက်ပစ္စည်းနဲ့ အစားအသောက်သာမက သူတို့ရဲ့ဘဝရပ်တည်မှုကို ပါထင်ဟပ်ပြသနေတဲ့ နေရာတစ်ခုပါ....
အင်းလေးကန်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာဒုတိယအကြီးဆုံးကန်ဆိုတာ သင်သိပါသလား? အင်းလေးကန်ဟာ ခန့်မှန်းခြေ မျက်နှာပြင် အကျယ်အဝန်း 44.9 စတုရန်းမိုင် နှင့် အမြင့်ပေ 2,900 ရှိပါတယ်။ ၎င်းသည် ရှမ်းပြည်နယ် ညောင်ရွှေချိုင့်ဝှမ်းတွင် တည်ရှိပြီး မြောက်မှတောင်သို့ ပြန့်ကျဲနေသော တောင်တန်းနှစ်ခုကြားတွင် တည်ရှိပါတယ်။ အင်းလေးသည် ရိုးသားကြိုးစားသော အင်းလေးဒေသခံ ၇၀,၀၀၀ ခန့် နေထိုင်ရာ ဒေသဖြစ်ပါတယ်။ အင်းလေးရှိ ရွာ ၁၇ ရွာသည် မတူကွဲပြားသော ဓလေ့ထုံးတမ်းများနှင့် ယဉ်ကျေးမှုများ ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်ပုံစံဖြင့် နေထိုင်ကြပါတယ်။
Covid-19 နှင့် Coup ကာလအတွင်း အထက်တန်းပြဆရာမတစ်ဉီး ရုန်းကန်နေရပုံ
How does he becomeacrafts-man?
ဧရာဝတီမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသမှ တောင်သူတစ်ဉီး၏ ပြောင်းစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း
ကိုဗစ် ၁၉ နှင့် နိုင်ငံရေး ဂယက်များအတွင်း ဟိုတယ်များ၏ အခြေအနေ
My Local Passion Rating
Hotel Thanlwin Paradise (Hpa-An)
Local Passion Rating
Moe Pyae Sone Restaurant Nyaungdone
Sai Kham Sam Ahlone
Danuphyu Daw Saw Yee Myanmar Restaurant Hlaing
Myo Ma Market Zabuthiri
Tha Pyay Gone Market Zabuthiri
Taung Za Latt
Koung Mon Bakery
Ngwe Taung Pyi Loikaw
Loom Kandarawaddy Loikaw
Diamond Kayin Traditional Dress Store Hpa-An
Ma Yu Kayin Traditional Costume Store Hpa-An
Crown Hpa-an Souvenir & Gift Shop Hpa-an